Olompiikii - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 7:06 31 Hagayya 20217:06 31 Hagayya 2021
'Osoon dorgommii biraarrattillee hirmaadhe nan injifadha ture'
Paaraalimpikii Tookiyoo biyya Jaappaan Magaalaa Tookiyootti adeemsifamaa jiruun Itoophiyaan seenaa keessatti yeroo jalqabaaf warqii argatteetti. Injifannoo booda BBC'n paaraa atileetii kana waliin turtii taasiseera.
...tti maxxanfame 6:38 31 Hagayya 20216:38 31 Hagayya 2021
Konkolaataan shufeer-maleessi balaa geessisuun dhorkamee ture hojiitti deebi'e
Mandara Taphoota Paaraalimpikii Tookiyootti balaa dhaqqabe hordofee, Toyota'n konkolaattota isaa shufeer-maleeyyii irra deebiin hojii eegalchiise.
...tti maxxanfame 15:26 18 Hagayya 202115:26 18 Hagayya 2021
'Siyaasni sababoota qabxiin Olompikii Itoophiyaa xiqqaateef keessaa tokko' - Koree Olompikii
Koreen Olompikii Itoophiyaa qabxii ‘gadi aanaa’ gareen Olompikii Itoophiyaa Olompikii Tookiyoo 2020 irratti galmeessiseef dhiifama gaafateera.
...tti maxxanfame 4:23 14 Hagayya 20214:23 14 Hagayya 2021
Dhimmoota ijoo torba qabxii atileetiksii Itoophiyaa huban beeku qabdan
Itoophiyaan waltajjii ispoortii addunyaa irratti waggoota 30 keessatti barana yeroo jalqabaaf qabxii gad – aanaa galmeessite. Biyyattiin yeroo xumuraaf olompikii irratti warqii tokko qofa kan argatte Baarseloonaa bara 1992’tti ture. Sababoonni ijoo qabxiin ‘’mufachiisaa’’ Tookiyootti argameef maali? Ogeeyyiin maal jedhu?
...tti maxxanfame 4:39 11 Hagayya 20214:39 11 Hagayya 2021
Seenaa Olompikii keessatti Itoophiyaan qabxii gadaanaa kan galmeessite yoomi?
Dorgommii kana Ameerikaan miidaaliyaa 113 argachuun tokkoffaa, Chaayinaan lammaffaa, qopheessituun dorgommichaa Jappaan sadaffaa, biyyi ollaa Itoophiyaa Keeniyaan 19ffaa, Itoophiyaan ammoo 56ffaa baateetti.
...tti maxxanfame 4:21 11 Hagayya 20214:21 11 Hagayya 2021
Gabatee medaaliyaa Olimpikii isa biraa Itoophiyaa 6ffaarra kaa'e
Gabateen medaaliyaa Olimpikii ammallee olaantummaa biyyoota gurguddoo kanneen akka Ameerikaa fa'in obba'e. Garuu, otoo qabeenyaafi lakkoofsa uummataa tilmaama keessa galchine gabateen kun maal fakkaata?
...tti maxxanfame 4:17 10 Hagayya 20214:17 10 Hagayya 2021
Qabxii Itoophiyaa Tookiyootti hanqateef federeeshiniin atileetiksii maal jedha?
Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa qabxiin Olompikii Tookiyoorratti argame qoratamee qaamni balleesse itti gaafatama fudhatuu qaba jechuun dubbate.
...tti maxxanfame 9:23 9 Hagayya 20219:23 9 Hagayya 2021
Dorgommii Olimpikii fageenya sadanii 'akka qoosaa' kan eegalte Siifan
Atileetiin Neezarlaandis dhalattuu Itoophiyaa taate Siifan Hasan, erga Olimpikii Tokiyoo gubbaa medaaliyaa sadiin galte duuba dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa taateetti.
...tti maxxanfame 6:39 9 Hagayya 20216:39 9 Hagayya 2021
Taateewwan ajaa'ibsiisoo Olompikiin Tookiyoo Covid-19 qofaan akka hin yaadatamne taasisan
Taateewwan ajaa'ibsiisoo fi hamilee namatti horan taphoota Olompikii amma duraa irratti mul'atanii hin beekne.
...tti maxxanfame 9:37 8 Hagayya 20219:37 8 Hagayya 2021
Leenjistuun farda bunyaan dhawuun dorgommii keessaa ari'amte
Leenjistuun biyya Jarmanii erga fardi dorgommii keessa ture gufachiisa utaaluu didnaan bunyaan rukutte tapha Olimpiikiirraa ari'amte.